၁၅၀၀တန် ဆင်းမ်ကဒ်များအတွက် ဟမ်းဆက်ထ်များအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » ၁၅၀၀တန် ဆင်းမ်ကဒ်များအတွက် ဟမ်းဆက်ထ်များအကြောင်း
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Apr 22, 2013 in Computer & Cell Phone | 17 comments
800Mhz phone CDMA 2000 1x
မင်္ဂလာပါ ပိတ်သတ်ကြီး ….။
ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ ဒဲ့ဂွင်ရိုက်တဲ့ ခေတ်မှာ … ၁၅၀၀ ဆိုတဲ့ တန်ဖိုနည်း ဖုန်းကဒ် ၁သန်း ထွက်လာပါဘီ ခင်ညာ …။ အဲ ပြောစရာရှိတာကတော့ ၃သိန်း ၅သောင်းသာ ရှေ့ကိုထွက်လာပီး ကျန်တာကတော့ … ကျန်တာကတော့ ပိတ်သတ်ကြီး သိတော်မူတဲ့ အတိုင်းပေါ့ … အကြောင်းပြကတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ မတန်တဆ အမြတ်တင်ပီး ရောင်းချမယ့် သူတွေကို ထိန်းသိမ်းရန် အလို့ငှာပေါ့။ ထားပါလေ ဒါက သူရို့ကိစ္စ ကျနော်တင်ပြချင်တာကတော့ ပိတ်သတ်ကြီးတို့ ပတ်ဝင်းကျင်မှာ CDMA 800 လို့ခေါ်တဲ့ CDMA 2000 1x , 800Mhz EVDO ဖုန်းဟမ်းဆက်တွေ ၀ယ်ကိုင်မဲ့သူတွေ ရှိပါက သိစေရန်ငှာ ကျည်ကွယ် မျက်ကွက်ကနေ ဆြာဂျီးလုပ်ပီး လက်ကမြင်း လိုက်ပါတယ် ခင်ညာ .. ဒန့်တန့်တန့်
Huawei Offical လို့ ခေါ်ဆိုရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ Huawei Company ကတရားဝင် ထုတ်လုပ်ထားလို့ပါ။ လက်ရှိ ဈေးကွက်ထဲမှာ သုံးနေတာတွေကတော့ huawei က လက်ခစား စနစ်နဲ့ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စက်ရုံတွေက ထွက်လာတာရယ်။ တလုပ်ပြည်မှာ တရားဝင် ဖြန့်ချီခွင့်ရထားတဲ့ Surfing ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီက တဆင့်ဖြန့်ချီတဲ့ ဖုန်းတွေရယ် … ရောကော သောကောနဲ့ စုံစီနေမှာပါ။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ …. သို့ပေသို့သော်ညားလဲ သုံးလို့ကောင်းရင် ပီးတာပါဘဲပေါ့။ ဆိုတော့ အထက်က Huawei M835 သည် ကျနော်တို့ဆီကိုတော့ C8500 အဖြစ်နဲ့ lock ကျတာကျ root မရတာ မရနဲ့ ၀င်လာပါလိမ့်မယ်။ ခက်တာကတော့ အန်းဒရိုက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် Google Play Store နဲ့ ငြိပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာတော့ မရှိပါ Zapya သုံးပီး Share ကျရင်တော့ အဆင်ပြေနိူင်ပါတယ် ခင်ညာ။
အဓိကတော့ ဖုန်းမ၀ယ်ခင် ဖင်လှန်ပီး စစ်သင့်ပါတယ် ( ဟန်းဆက်ကိုပြောတာ ) အတွင်းက ဘထ္ထရီကို ခွာပီး တရုတ် အခွန်ဆောင်ပီး တံဆိပ်နဲ့ တလုပ်ရဲ့ QC … အမှတ်အသား CCC ကိုလဲ ရှာစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပီးတော့ ဖုန်းရဲ့နောက်ကာဗာမှာ Surfing ဆိုတဲ့ တံဆိပ်လေး ပါရင် ပိုကောင်းမှာပါ။ ဆိုတော့ ဟတ်ဝဲပိုင်း စိတ်ချပီးနောက်မှာတော့ ဆော့ဝဲပိုင်း တလုပ်ရဲ့ ဂျူရွှမ်ရှီး ဂူချန်းဂီး စသဖြင့် တလုံးမှ ဖတ်မတတ်တဲ့ ဆော့ဝဲ ၈မျိုးလောက်ကို သင် အမြစ်တူးလို့ မရမခြင်း စိတ်မချမ်းသာဖွယ် တွေ့ရမှာပါ။
အထက်က ဖုန်းကတော့ Huawei ရဲ့ A 199 လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ C Series ပေါ့ခင်ည။ Spec လဲကောင်း သုံးရတာလဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ အမြစ်တူးလို့လဲ ရမှာပါ။ ဒါပေသိ အထက်ပြောခဲ့အတိုင်း ၁၀လုံးမှာ ၄လုံးလောက် ဖောက်ပါလိမ့်မယ်။ Spec တွေကိုတော့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး အဓိက ဒီပို့စ်ကို ရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဖုန်းဝယ်ရင် သတိထားမိစေချင်တာပါဘဲ။ ဘထ္ထရီတွေ လဲထားရင်၊ နားကျပ်တွေ၊ အဒပ်ပတာတွေ ဈေးကွက်အရ အပြိုင်အဆဲ ရောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ၀ိတ်လျော့ကျမှာမို့ ကျနော် အထက်ကတင်ပြတဲ့ ဖုန်းဘထ္ထရီအောက်က CCC တံဆိပ်နဲ့ အခွန်တံဆိပ်ပြားပါမှသာ ၀ယ်ရန်သင့်ပါတယ်။ နောက်တခု ဆိုလိုရင်းက Huawei သည် Surfing အတွက်သာ ဖုန်းတွေကို အော်ဒါစနစ်လက်ခံပီး နာမည်ခံ ထုတ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ အောက်မှာကတော့ ကောင်းနိူးရာရာ ရှာတွေ့သမျှ တင်ပေးလိုက်ပါကြောင်း …… ။
Samsung Duos i919
ကျနော့ ထင်မြင်ချက်ကိုပေးပါ ဆိုရင်တော့ HTC ကို ပိုပီးအားသန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးရင် မစ္စတာချူးက ကြောငြာခ ပေးထားလို့ မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကတည်းက ကျနော် China Telecomရဲ့ CDMA ကဒ်တွေ သုံးတော့ HTC ရဲ့ Desire Series , CDMA 2000 1x EVDO rev. A ကို သုံးဖူးလို့ပါဘဲ။ ဒီနေရာမှာ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဖြီးရရင်တော့ CDMA 800 သည် Bandwith ကို အနိမ့်သုံးထားတဲ့ 3G, 2G type ဖုန်းအမျိုးအစားပါဘဲ Bandwith သည် 900/1800/2100 Mhz သွားတဲ့အခါ singal bw ကို 800သို့ နှိမ့်လိုက်တာပါဘဲ။ ကကြီးနဲ့ ဂငယ်မှာ တိုင်နဲ့ LTE တွေကို 3G to 4G ပြောင်းတဲ့ ခေတ်မှာ bw ကို 800/2100 Mhz ချလိုက်တဲ့ အတွက် (ကစားလိုက်တာ T-mobile, Verizon, etc….. ) rev. A ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားသစ်တရပ် ပေါ်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်( အထင်) ဆိုတော့ ……. Huawei ရဲ့ 8813မှာ Locked ကျတဲ့ ပြဿနာရှိနေပါတယ် ခင်ည။ သို့ဂလိုကြောင့် HTCရဲ့ Incredible S … S710E ကို re_version လုပ်ထားတဲ့ S710d ဟာ ဖုန်းကောင်းကောင်း ကြိုက်သူတွေ အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလို့ ယူဆပါတယ်။
နောက်ဆုံးတင်ပြချင်တာကတော့ တလုပ်ကြီးရဲ့ အခွန်စည်းတံဆိပ်နဲ့ QC သတ်မှတ်ချက်ပါဘဲ ….။ အောက်မှာ မြှားထိုးပီး ပြထားပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံးထပ်ကွန့်ချင်တာကတော့ CCC သုံးလုံးတံဆိပ်ဟာ …. ကြိုက်သလို ၀ယ်ကပ်လို့ ရတာမို့ …. ကံကောင်းဂျဘာဇေလို့ ဆုတောင်းရင်း ….။
လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ … ဒန့်တန့်တန့်
အဗ္ဗဒူလာဖက်ဒရယ်ခရိုနီ တက္ကနေရှင် အာချောင် ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ် ဖက်ဒရယ်ယဲစီ ( ABSED, Dip .. GD, Phd..AKG)
(သုမင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း , United State of သာကေတ၊ ခေတ္တ UST )
ပျောက်သွားတာ ဘာ ဖုန်း လေးတုန်း။
တွေ့ရင်ပြန်ပေးမှာ မို့လို့လား ….။
ဟန်းဆက်ကိုတော့ မသမျှောပါဘူးဂျာ … အမှတ်တရရိုက်ထားတဲ့ ဒါ့ပုံတွေကို နှမြောတာ … အဲ့လာတွေက ပြန်လုပ်ယူလို့မှ မရတော့တာ
အဗ္ဗဒူလာဖက်ဒရယ်ခရိုနီ တက္ကနေရှင် အာချောင် ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ် ဖက်ဒရယ်ယဲစီ ဟူးးးးးးးအမလေးးးးးးးးးးးးးမောထာ………. ဟန်းဆက်တွေအကြောင်းဖတ်သွားတယ်နော်…
တရုပ်လုပ် က ကိုင်ကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိဘူး… တရုပ်မတွေကတော့ အကိုင်မခံဘူးတော်ရေ..
ဟန်းဆက်တွေပြောပြီး ခန်.မှန်းဈေးလေးမပြောတော့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ အေ… သခိုးဈေးမှာ သွားမေးရင် ၂၀၀၀၀ ကျပ်နဲ. ဘရန်းမျိုးစုံ ရတယ်.. ဟွင်းဟွင်းဟွင်း…
ရာထူးဘွဲ့ထူးတွေကို ကြည့်ပြီး ရေးထားတာတွေကို ယုံကြည်လိုက်တယ် မှတ်ပါ။ :harr:
အချိန်ကိုက် ပညာပေး အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးမို့ ပျင်းနေတဲ့စိတ်ကို သတ်ပစ်ပြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ :hee:
တစ်ခု သိချင်လို့ ။
အခု 800Mhz တွေရဲ့ Service Provider က MEC ကတဲ့ ။
အရင်တုန်းက 800Mhz နှင့် 450Mhz တွေရဲ့ Service Provider က MPT ကတဲ့ ။
ဒါကြောင့် Service Provider မတူတဲ့အတွက် ၊
အခု 800Mhz တွေ ကို အရင်တုန်းကလို 450Mhz ( ကမ်းရိုးတမ်း ) Hand Set ထဲထည့်သုံးလို့ မရတော့ဘူးတဲ့ ။
အဲဒါ ၊ ဟုတ်လားဟင် ။
ဦးဖောဗျ …. ဒါက ဂလိုရှိပါတယ် ..
ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာအကြောင်းတော့ အကျယ် မပြောတော့ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူများနိူင်ငံတွေမှာ ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာသည် စ၊လယ်၊ဆုံး .. အင်ဇရာမှသည် ကာစတန်မာ၊ ကွန်ဇူးမားအထိ သေချာလုပ်ကိုင်တတ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာ ရွှေတောင်၊ ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာ အေးကန်ပဏီလိမိတက်၊ ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာ နိူင်ဂရု၊ ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာ …. ဘာညာ စသဖြင့် မည့်သို့ အမျိုးမျိုးကွဲစေကာမူ အင်ဖရာကတော့ ကကဆက် လက်အောက်ကနေ မလွတ်ဘူး ခင်ဗျ၊ ပြောသာပြောနေရတာ MPT လဲ သူ့ အင်ဖရာတွေက ကကဆက် လက်အောက်မှာပါ။
ဒီတော့ … ခု MEC ပြောင်းသွားလဲ ဘာမှ မထူးပါဘူး ဒုန်ရင်းက ဒုန်ရင်းပါဘဲ ….။
ဦးဖောပြောတဲ့ အရင်က CDMA 800 ဆိုတာ ကျနော် အပေါ်မှာ ရေးပြခဲ့သလို ဘန်ဝပ်ထ်ကို အောက်တထစ်ချတဲ့ သဘောပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှင်းအောင် ပြောရရင် အရင်တုန်းက ဝေါ်ကီတော်ကီ သုံးကျတဲ့နေရာမှာ မြေပြင်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် VHF သုံးကျပီး ဝေဟင်၊ ရေပြင်သမားတွေကတော့ UHF သုံးကျတာပါ။ VHF က 63Mhz ကနေ 136MHz အထိရှိပီး UHFကတော့ 136MHzကနေ 430Mhz အထိရှိပါတယ်။ဘာကွာလဲလို့မေးရင် wave length ကို အဖမ်း၊ အပို့ မှာဘဲ ကွာတယ်လို့ ဆိုနိူင်ပါတယ်ဗျ။
ဆိုတော့ တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာ ကွဲရင် မူကွဲ၊ နည်းပညာကွဲပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ “ဘယ်သူကွဲကွဲ ဒို့မခွဲ အမြဲစည်းလုံးမည်”ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ဘာမှ ထူးခြားမည် မဟုတ်ပါ။ အခုလည်း MEC က ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာ အမည်ခံပီး သူ့ဘတ်ဂျက်ကို ကွန်မြူနကေးရှင်းဘက် စာရင်းလှည့်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ MECမှာ DGM ကနေ သန့်ရှင်းရေးအထိ ဖုန်းဆိုရင် ခေါ်တတ်တာကလွဲပီး ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာ လုပ်ဖို့နေနေသာသာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိပါဘူး …။
အဲ..အဲ လိုရင်းဘဲ ပြောတော့မယ်
အရင်က …. ၇၃၀….. ၊ ၄၃၀……၊ ၈၆………၊ အစရှိသဖြင့် ဖုန်းတွေဟာ ဂြိုလ်တု အားကိုးစရာမလိုတဲ့ Short Wave Feq တွေ ဖြစ်တဲ့ အလျှောက် ရောကော သောကောနဲ့ ခြင်းဖုန်း၊ ကန်းရိုးတန်ဖုန်း၊ နေပြည်တော်ဖုန်း ဆိုပီး လိမ်စားသွားတာ ခင်ဗျ။
ဒဲ့ပြောရရင် … 800Mhz ဆင်းကဒ်ကို 450Mhz handaet ထဲထည့်သုံးနိူင်ခြင်းဟာ ကိုသိန်းဇော်နဲ့ သားများ ကန်ပဏီရဲ့ ဆလပ်ကွက် ဖြစ်သလို တလုပ်ကြီးရဲ့ အင်တင်နာ တောင်ရွှေ့ မြောက်ရွှေ့ မဟာဗျူဟာ ကံစမ်းမဲသာဖြစ်ပါကြောင်း ……..။
ကျနော့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ စာနဲ့ပေနဲ့ ပီပီသသ ရှင်းအောင် မရေးပြတတ်တာမို့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ … နော။
ဆိုလိုရင်း … မရောက်ရင်လဲ ပြန်ထောက်ပေးပါ သိသလောက်( အတွင်းရေးမဟုတ်၊ နည်းပညာပိုင်း ) ပြန်ပြောပေးပါ့မယ်။
က ရဲစည် ။
သိပ် မရှင်းသေးဘူး ။
၁ ။ အခု အသစ်ထွက်မယ့် ၁၅၀၀ ကျပ်တန် 800 MHz ဆင်းကဒ်တွေကို ၊
450 MHz Hand Set ထဲမှာ ထည့်သုံးလို့ ရမလား ။
လိုရင်းကတော့ အဘ ကမ်းရိုးတန်း ဖုန်း 450 MHz facility ကိုသုံးချင်တယ် ။
အခု အသစ် ထုတ်ရောင်းမယ့် ၁၅၀၀ ကျပ်တန် 800 MHz ဆင်းကဒ် ဝယ်ရင် ရမလား ။
၂ ။ ” အင်ဖရာကတော့ ကကဆက် လက်အောက်ကနေ မလွတ်ဘူး ”
” MPT လဲ သူ့ အင်ဖရာတွေက ကကဆက် လက်အောက်မှာပါ ”
MPT က ဘယ်လိုလုပ် ကကဆက် အောက်ရောက်သွားရတာတုံး ။
အခု တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အနှံ့ ထောင်ထားတဲ့ တာဝါတိုင်တွေက ၊
MPT ကပိုင်တာလား ။ ကကဆက် က ပိုင်တာလား ။
၃ ။ သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်တော့ နဲနဲ သဘောပေါက်လာတာက ၊
ကကဆက်က စစ်တပ်အတွက် ထောင်ထားတဲ့ ၊
Short Wave တာဝါတိုင်တွေ ကို MPT က ယူသုံးနေတယ်လို့ ဆိုလိုတာလား ။
(၁) ဆင်းကဒ်မှာ 64K နဲ့ 128K ၂မျိုးကွဲနေပါတယ်။ ၁၅၀၀တန်ကို 3G ပေးမယ်ဆိုရင် 128K ဖြစ်သွားပါ့မယ် အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ 450 ဖုန်းထဲ ထည့်သုံးလို့ မရပါဘူး။ အရင်က သုံးလို့ရတယ် ဆိုတာက တာဝါတွေမှာ short wave အတွက် R/T activities ခဏပေးသုံးတဲ့ သဘောပါ။ သူတို့လက်ထဲ အဲ့ဒါတွေရှိနေတော့ ထုတ်ရောင်းလိုက်တဲ့ အခါ နေပြည်တော် လမ်းကြောင်းတလျှောက် သုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ သဘော။ နောက်ပိုင်း အင်တာနက်ပေးသုံးတော့ မရတော့ပါဘူး။ ပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဆင်းကဒ်သည် 3G ဆားဗစ်ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ 128K ဖြစ်မှာမို့ သုံးလို့မရနိူင်ပါဗျ။
(၂) ကျနော်တို့ဆီမှာ အင်တာနက်ကို ပြည်သူကို စမပေးခင် ဆက်ကြောင်း ဘက်ဘုန်းတွေ စထောင်တာ စစ်တပ်ပါ။ ရေအောင် ကေဘယ်လ် ပင်မလိုင်း ၁လိုင်းနဲ့ တလုပ်ကြီးဆီက ၃လိုင်း ယူထားပါတယ်။ ကိုရဲနိူင်တို့ ပုဂံဆိုက်ဘာတက်ခ် စထောင်တော့ ကေဘယ်လ် ၁လိုင်းကို အများပြည်သူအတွက် ခွဲပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့အချိန်ကတည်းက ADSL လျှောက်ချင်ရင် ပုဂံဆိုက်ဘာတက်ခ်မှာ ကကဆက် ညွှန်မှူးလက်မှတ်ပါမှ လျှောက်လို့ရပါတယ်။ ပြောချင်တာက စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ ခေတ်မို့ အင်ဖရာကို စစ်တပ်ကဘဲ စတည်ခဲ့တဲ့ သဘောပါ။နောက်ပိုင်းမှသာ MPTကို လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်တွေ ခွဲပေးတဲ့သဘောပါ။ ခုချိန်ထိ မြို့တွင်းဆက်ကြောင်းတွေက လွဲလို့ ကျန်တဲ့ ဖိုက်ဘာလိုင်းတွေ ဆက်ကြောင်းတွေကို ကကဆက်ကဘဲ တာဝန်ယူ ချိတ်ဆက်ပေးနေတာပါ။ ဆိုတော့ အများအမြင်မှာ ကွဲတယ်ထင်ပေမဲ့ လွယ်လွယ်ပြောရရင် … အိမ်သုံးနဲ့ အများသုံး ကွဲနေပေမဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ တစ်ဦးတည်းပါ။
(၃) အရင်က MPT မှာ ကြိုးလိုင်းဆားဗစ်နဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ကောက်ခံတာကလွဲလို့ အင်ဖရာအတွက် ဘာဘတ်ဂျက်မှ မရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ ယူသုံးခဲ့ပါတယ်။ ယူသုံးနေတုန်းပါဘဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ အခုချိန်မှာ ဘယ်သူပိုင်တာလဲ မေးရင် ဖြေရခက်ပါမယ်။ ဥပမာကတော့ ကျနော့်မှာ ကြိုးဖုန်းတလုံးနဲ့ ဟမ်းဖုန်းတလုံးရှိတယ် ဆိုပါစို့။ ဟမ်းဖုန်းကိုတော့ ကျနော်နဲ့ ကျနော့်မိသားစုသုံးပီး၊ ကြိုးဖုန်းကို အိမ်ရှေ့ထုတ် အများဆက်လို့ရအောင် အခကြေးငွေနဲ့ ငှားတဲ့သဘော။ အဲ့မှာတောင် လုပ်ကွက်၂ခုရှိတယ် တခုက ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုထုတ်ပီး ကိုယ်တိုင်ထိုင်လုပ်တယ်၊ နောက်တနည်းကတော့ သူများကို ကျသင့်တယ်ဘေလ် သူ့ဖာသာဆောင် တလဘယ်လောက်ဆိုပီး အပြတ်ငှားတဲ့နည်း။ ဆိုတော့ …. အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ။
ကဲကဲ . . အဲ့ဒါတွေ အသာထား . . . . တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းနဲ့ ကွက်တိ . . Samsung handset တွေကို Mobile Phone ဆိုင် တွေကို လိုက်စပ်ဟပ် နေပါပြီဗျ . . အခုထွက်မယ့် တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းအတွက် ကို တမင်တကာ ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါသတဲ့ . . . Branded, Touch ကို ဈေးသက်သက်သာသာ (အမှန်တော့ ကျုပ်လခ တစ်လခစာ လောက်ရှိရဲ့) နဲ့ ၀ယ်ကိုင် နိုင်တော့မယ့် အခွင့်အရေးကို MEC က . . . . လုပ်ပေးခဲ့ပါပြီ . . . . .။ အလုံးရေ သန်းချီ ရှိပါသတဲ့ . . . . . ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ . . ဗျို့  . . .
” အဓိကတော့ ဖုန်းမ၀ယ်ခင် ဖင်လှန်ပီး စစ်သင့်ပါတယ် ”
ခညားဒေါ့ မှားနေဘီ ထင်ဒယ် ..
ဒါမှ မဟုတ် မူးနေဒလားဘဲ …
ဘယ့်နှယ်ဗျာ .. အဓိက တော့ … ဆိုပြီး ..
ဖင်လှန်ပီး စစ်သင့်တယ်တဲ့ … (ဟန်းဆက်ကို ပြောတာ)
ယောက်ဖ မိုက်တယ်ကွာ…။ နည်းနည်းလေး ဗဟု ရယ် သုတ ရယ် တိုးသွားတယ်။
ကျုပ်အခု သုံးတဲ့ ဟန်းဆက် က စီ 8813
စဝယ်မယ်လုပ်တုန်း မန်းတလေး ဈေးကွက်မှာ ပစ္စည်းပျက်နေလို့ 
ဒါပေသည့် ဗမာဖောင့်ရဖို့ အတွက်ကျ ၂ရက်ပဲ စောင့်ရတယ်
အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်း 4.1.1 ၊ အင်တာနယ် မင်မိုရီ4ဂစ်
ဒါပေသည့် တော်တော်လေး ကို သုံးလို့ ကောင်းပါတယ်
ဒါပေသည့် အကြမ်း မခံဘူးရယ်
စပီကာ ဖွင့်ပြောမှ ၊ တစ်ဘက် က ကြားရတော့တယ်
အခု အက်ဆန်း ဒီ2 စောင့်နေတယ်
ဂျီ ရော စီပါ သုံးလို့ ရတယ်
နာမည်ကြီးတွေ ကို ယှဉ်ဖိုက်ထားတဲ့ ဖုန်းတဲ့ဗျား